Bærum: Gabar soomaali ah oo xisbiga Høyre uga sharaxan golaha deegaanka Bærum. - NorSom News
Bærum: Gabar soomaali ah oo xisbiga Høyre uga sharaxan golaha deegaanka Bærum.
Anfac Xaashi Goodir
Xisbiga Høyre, laantiisa magaalada Bærum ayaa dhawaan soo saaray liiska xubnaha sanadkan uga sharaxan doorashada golaha deegaanka. Waxaana markii ugu horeysay liiskaas kasoo muuqday gabar dhalinyaro soomaali ah oo lagu magacaabo Afnac Xaashi Goodir.
Anfac ayaa sida uu xusay wargeyska lokalka ah ee Budstikka, waxey noqon doontaa qofkii ugu horeeyay ee kasoo jeedo Afrika oo kamid noqdo liiska xubnaha u sharaxan golaha deegaanka Bærum.
Anfac X. Goodir oo kamid ah xubnaha aktiv-ka ah ee xisbiga Høyre, laantiisa Bærum ayaa marar badan kasoo muuqatay shaqooyinka uu xisbigaas ka qabto Oslo. Sidoo kale waa ardayad diyaarisa shahaadada masterka, sida uu qoray wargeyska Budstikka.
Siyaasiyadan soomaalida ah ayaa kamid ah dadka kooban ee soomaalida ah ee katirsan xisbiga midigta ee Høyre.
Previous articleMinnesota: Soomaali kale oo ku guuleystay xil sare oo siyaasadeed.
Next articleAxmed H. Ali: Waxaan rabaa in soomaalidu ay fahmaan Barnevern-ka, aysana ka cabsan.